Sida loo Download New York Times fudayd
> Resource > Video > Sida loo Download New York Times Video la One Click
The Times New York waa mid ka mid ah saddex wargeysyada ugu weyn ee America, iyadoo The Wall Street Journal iyo USA Today ka hor. Marka laga reebo akhriska ay wargeyska daabacay, waxa kale oo aad ka heli kartaa iyo dhirta wararka iyo wararka dunida website-ka, www.nytimes.com. Habka ugu dambaysta si aad u hesho macluumaad ka wargeyska ayaa noqonaya mid aad iyo aad u badan ku baahay tan waa sahlan iyo jawi saaxiibtinimo. Waa maxay ka badan, waxaa jira noocyo badan oo ah content website-ka sida videos, sawirada midabka iyo in ka badan.
Halkan yimaado su'aal. Haddii aad hesho qaar ka mid ah videos wanaagsan on nytimes.com, aad rabtid in aad kala soo bixi iyaga iyo badbaadin your computer? Haddii ay haa tahay, barnaamij awood diyaar u yahay inuu cawinaada Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ). Waxaa soo bixi kartaa New York Times in kaliya click ah.
Marka hore, soo dajiyo version saxda on your computer iyo waxa maamula si aad u hesho interface fudud oo si sahlan loo isticmaalo. Markaas aynu hubi hagaha faahfaahsan hoos ku qoran. Waxaan inta badan ka hadli doonaa version daaqadaha.
1 Raadi videos on nytimes.com
Tag nytimes.com si aad u hesho jecel videos aad. Oo weliba guji videos ay ku ciyaaraan. Xasuusnow in aad la ciyaareyso videos on daalacashada sida IE, Firefox iyo Chrome, si videos waxaa la ogaan karaa oo lagala soo bixi by barnaamijka.
2 Download NYTimes in click ah
Raadi button Download Midigta sare ee video shaashad? Waxaa Click iyo barnaamijka bilaabi doonaan in ay soo bixi NYTimes video mar.
Dabcan, waxaad kala soo bixi kartaa video ah via ay url. Copy url iyo riix badhanka URL koollada. Tani waxay sidoo kale bilaabi doonaan habka dajinta.
3 Beddelaan NYT videos in qaabab kale (optional)
Ka dib markii videos waxaa lagala soo bixi, oo aad ka heli kartaa qaybta soo bixi. Riix badhanka badalo iyo doortaan qaab ama qalab la-beegyada uu horena in ay qaab wax soo saarka. Dooro OK iyo diinta lagu sameyn doonaa dhowr daqiiqo.
Markaas waxaad xaq u-riixi kartaa videos ka dooro Open Folder ee diinta u heshaan videos ku kaydsan on your computer iyo iibsiga qalabka la qaadi karo si aad u hesho wakhti kasta loo maqli karo iyo meel kasta.
Waxay u egtahay la yaab leh, soo maaha? Waxaad sidoo kale isticmaali karaan barnaamijkan inuu u ciyaaro videos la qaabab kala duwan. Waase in aad leedahay videos badan on your computer, aad dajiyaan karaa in qaybta soo bixi in si fiican loo maamulo. Diyaar ma u leedahay in isku day ah? Just ka hor tago oo aad doonaysid in aad u jecel yihiin.